Ogaden News Agency (ONA) – Maxaad ka ogtahay wixii Axmed Nuur Xiirey iyo Ibraahim dheere Makka ku dhex maray?
Maxaad ka ogtahay wixii Axmed Nuur Xiirey iyo Ibraahim dheere Makka ku dhex maray?
Ilaahay wuxuu Rasuulkiisa CS ka ballan qaaday iyo umadda islaamka ahba inuu ka soo saari doono kuwa khiyaanada le dhex socda calaamado ay ku gartaan .. (ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ). Rasuulka CS wuu garanayay isaga munaafiqiintii la noolayd, asaxaabtiisa mid ka mid ah wuu u sheegay, hasa ahaatee, qaacida caam ah ayaa jirta oo Ilaahay SWT uu noo sheegay oo ah inaan ku garan doono falaadkooda iyo waxyaabaha afkooda ka soo baxaya.
(أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ) .. Muddo dheer ayuu Ibraahim dheere umadda la dhex socday inuu yahay mujaahid aan loodsamaynin. In badanna wuxuu kala dhex dhigay shacabka S. Ogadenya dhiilo iyo khilaaf dhiig uu ku daatay. Sidoo kale wuxuu ku dadaalay inuu Somalida ku diro kana horkeeno jabhadda xaq-u-dirirka ah, taasoo keentay in qaar badanoo iyaga ah loogu laayo gudaha Somaliya sawirkii khaldanaa uu ka bixiyay darteed.
Warbixintan hoose waxaa noo soo diray qoraa Cali yare oo sanadkan xajka la soo gutay malaayiintii muslimiinta ahayd. Wuxuuna ku bilaabay;
Sida dad badani la socdaan, Ibraahim dheere, ayaa wuxuu caadaystay inuu ku soo noq-noqdo magaalada barakaysan ee Makka. Dad badan baa aaminsan inaan ibraahiim dheere cibaadaysi iyo Alle ka cabsi Makka u iman balse arimo siyaasadeed iyo kuwa dhaqaale uu Makka u yimaado.
Waxay kaloo dad badan aaminsan yihiin in Ibraahim dheere Xajka loogu soo diro suu uga dhex kaluumaysto dadka xujayda ah ee meelaha kala duwan ka kala yimid uguna abuuro tashuush iyo jaahwareer iyo inuu weliba ujeedo qaldan dadka ka gado isaga oo shaati wadaad u soo huwanaya hadba kuwa uu is leeyahay kuma garanayaan ama fikirkiisa gaalo jacaylka ahi wuu ka gadmayaa.
Hadaba wuxuu Ibraahiim dheere hadba qolo aan aqoonin afka u dhuubaba oo cumaamad khaa’inimo u soo hulaabtaba, sannadkan xaalkiisu wuxu noqday ” Hilo walba ka cabtaye waa hiladdii yaxaasku kugu qaadi lahaa”. Ibraahiim dheere oo siddi caadadu u ahayd kitaabkiisii macna badane ee beenta ahaa la luudaya si uu xasuuqa Ogadeniya ka socda dadka ugu indha saabo, qorshaha Meles ee gumaadka ku salaysana u suuq geeyo ayuu “Aar” meel fadhiya afka uga soo galay. waxa la yidhi “Shimbir duulid badanay hadaad degi aqoon waydo mar unbaad libaax labaddi daan dalaq tidhaahdaaye”
Ibraahiim dheere oo iska qabar moog ah ayaa Xujey meelo kala duwan ka timid oo qaar ka mid ahi ay USA ka yimaadeen makarafoonaddiisii codka dheeraa soo kordhigtey, hase yeeshee Illaah Ibraahim dheere wax aanu filaynin ayuu meeshii kala kulmiyey. Wuxu goobtii kala lugeeyey ceeb iyo waji gabax aan la qiyaasi karin ka dib markii Axmed Nuur Xiirey oo USA ka soo xajiyey uu dagaal kala hoos kacay kuna amray inuu si deg deg ah goobtaas uga tago haddii kale in wax aan horey Makka uga dhicin uu dhici.
Hadaba markii aan maqlay wadhida Ibraahim dheere “Mina” ka qabsatey ayaan xidhiidh la sameeyey Axmed nuur Xiirey si aan u xaqiijiyo wixii meesha ka dhacay. Aniga iyo Mr. Xiireyna sidan ayey sheekaddi noo dhex martey:
Ali: Hello Ahmed nuur Xiirey, salaama calaykum.
A/Nuur Xiirey: wa calaykuma salaam.
Ali: waa nin Cali yare lagu magacaabo oo koley ku garanaya. Waxan rabaa bal inaan wax kaa waydiiyo waxa idin dhex marey adiga iyo Ibraahim dheere madaxii Ajjo-gudhay. Marka horase maxaa ka jira sheekadan aan maqalnay?
A/Nuur Xiirey: walahi sheekadani way jirtaa waana sida aad u maqasheen.
Ali: Fadlan bal ma noo faahfaahin kartaa siday wax u dhaceen?
A/Nuur Xiirey: waxa dhacay aniga oo teendhaddii aan deganaa iska hadhsanaya oo iska cibaadaysanaya ayuu wiil yari ii yimid iina sheegay in nin wadaad ah oo sheikh Ibraahim la yidhaahdo uu muxaadaro jeedin rabo. Wiilkii baa intaan kor u fiiriyey ku idhi, maxad tidhi? sheekh Ibrahiim aa? Ka dibna wuxuu wiilkii ii xaqiijiyey in ninka makarafoonka wataa uu ibraahiim dheerahii is dhiibay yahay. Hal mar unbaan is daba maray meel aan joogana garan waayey, ka dibna intaan dhiniciisa u dhaqaaqay oon kor istaagay ayaan ku idhi “Maantana ma waxaa laguu soo direy inaad Xajkayaga buriso ood cibaadadayada carqaladayso. intaas kuma daynine intaan hadalkii kor u qaaday oo aan dadkii isu diyaarinayey dhaqaysigiisa dhinacooda u jeestey baan idhi “Waxad socotaanba ma maanta ayaad Meles Zenawi teendhada noogu keenteen?”. isla markiiba intaan Ibraahim dheere jaleecay baan ku idhi “War ka bax meesha mujrim yahow waynaaday”
Markii xaalku halkaas marayo ayaa waxa dhacday in dhowr shaqsi oo wacdiga la abaabulayey isaga iyo dad kale oon aqoon u lahayn isna tusay in wadaadka laga gardaran yahay ay isku dayaan inay Ibraahim dheere la soo saftaan. ka dibna intaan ku dhaqaaqay baan ku idhi “Walahi isaga iyo intiinan hadlaysaba inaan dhulka idinku jiidi haddii aydaan si deg deg teendhada uga saarin”. Markii ay arkeen in xaalku meel xun iga marayo ayey damceen inay teendhada kala xidhaan oo qaybtii aan fadhiyey qayb aan ahayn u diyaariyaan halkaasna uu muxaadaradiisa ka sii wato. hase yeeshee intaan ka dabo tagey baan ku idhi ” Walahi baan ku dhaartee in wax aan Makka horey uga dhicin uu maanta dhici haddii aan ninkan meesha laga saarin”
Ibraahim dheere markuu arkay halka xaajo marayo iyo sida jawigu u kacsan yahay ayuu intuu kabaha gacanta ku qaatey halhaleel uga baxay teendhaddii.
Ali: Axmed waad mahadsan tahay.
A/Nuur xiirey adaa mudan.
Intaas kuma joogine waxan bilaabay inaan dib u raad raaco siddii wax u dhaceen. Waxan isku dayey bal inaan helo qof goobta ka dhawaa xiligii iska hor imaadku uu dhacayey. Nasiib wanaag waxaa ii suurto gashay inaan helo nin lagu magacaabo Xuseen Xirsi Cali dubad oo isaga qudhiisu ahaa Xujeydii USA ka timid Xiireyna ay isku teendho ahaayeen. xuseen wuxuu ii sheegay in xiliga wax dhacayeen aanu goob joog ahayn balse uu goobta yimid iyada oo weli buuqii taagan yahay. waxaa kale oo uu ii sheegay in xaalku ku sigtey in laba saf laysu fara saaro. xuseen wuxu ii sheegay in dad badan oo u haystey in Ibraahim dheere laga gardaran yahay ay markii dambe is badaleen ka dib markii aanu taariikhdiisii u sharaxnay. xuseen wuxuu dadkii u sheegay in Ibraahim dheere ku xidhnaan jirey Settle Washington oo uu xoog iyo xoolaba ku bixiyey siddii xabsiga looga sii dayn lahaa. balse markii Ibraahim dheere xabsiggii laga sii daayey waxa dhacday inuu itoobiya isu dhiibay dabadeedna uu hooyooyinkayo iyo aabayaashayo uu badhna cadowga ku dilo badhna jeelka ka buuxiyo. xuseen wuxuu ii sheegay in dhamaan dadkii uu taariikhda Ibraahim dheere uga sheekeeyey ay fajac iyo amakaak meeshii kala tageen.
Dhinaca kale warar hoose oo dad Ibraahim dheere ka ag dhawaa laga soo xigtey ayaa waxay xaqiijiyeen in Ibraahim dheere lagula taliyey inaanu teendhadaa tagin. Waxa dib laga ogaadey in nin sheekh ahi ku yidhi “Ibraahinow ilama qumana inaad teendhadaa aado waayo rag aad sannadkii hore is dagaasheen baa jooga”. Hase yeeshee Ibraahim taladaa wuu ka dhaga adaygay. Balse waxaa wax lala yaabo noqotey in markii Ibraahim sheere teendhadii ragga laga soo caydhiyey inuu yidhaahdo dumarka ha la ii shiriyo aan wacdiyee. rag badan baa waxay aad ula yaabeen “Samir xumada iyo sariig li’ida Ibraahim dheere”. nin raggii ka mid ah ayaa wuxuu Ibraahim dheere ku yidhi ” Oo naagaha raggii qabay sow kuwan ku soo eryey ma aha sideed u wacdiyi?” ugu dambeyn Ibraahim dheere oo kabna luli kabna lalaadin ayaa halkaas ka huleelay.
Xaaji Ali Yare